Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Belgium u fadhiya Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Belgium u fadhiya Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo safiirka cusub ee Belgium u fadhiya Soomaaliya Roxane de Bilderling.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada Belgium u qaabilsan Soomaaliya Roxane de Bilderling.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa balanqaaday in dowladiisa ay si buuxda ula shaqayn doonto safiirka cusub ee Belgium, wuxuuna bogaadiyay doorka Belgium ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya.
Safiir Roxane de Bilderling ayaa sheegtay in wadankeeda oo qayb ka ah Midowga Yurub uu balanqaaday adkaynta xiriirka labada dal u dhaxeeya.
Dowlada Belgium ayaa sheegtay in ay Soomaaliya kala shaqayn doonto dhinacyo kala duwan oo ay kamidyihiin la dagaalanka argagixisada, amaanka, dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada.